OnePlus ရဲ့ OnePlus7Series တွေအကြောင်း ကျွန်တော်တို့ နောက်ဆုံး သိထားရသမျှ - PX
OnePlus ရဲ့ OnePlus7Series တွေအကြောင်း ကျွန်တော်တို့ နောက်ဆုံး သိထားရသမျှ
အရင်နှစ်တွေတုန်းက OnePlus ဆိုရင် Flagship killer ဆိုပြီးလူတိုင်းသိကြပါလိမ့်တယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ Flagship segment ထဲကိုခုန်ဝင်လာခဲ့ပါပြီ။ ခါတိုင်းဆိုရင် OnePlus (?) ကိုမိတ်ဆက်ပြီး နောက် ၆လလောက်ကြာမှ OnePlus (?)T ဆိုပြီး မိတ်ဆက်တတ်တာပါ။ တစ်ခါမိတ်ဆက်ရင် တစ်လုံးထဲ ဒီနှစ်တော့ နည်းနည်းထူးခြားလာတယ်ဗျ။ OnePlus7အပြင် Premium features တွေပါ ပါလာမယ့် OnePlus7Pro ကိုပါ မိတ်ဆက်လာပါတော့မယ်။
ပထမဆုံး Oneplus7ကိုကြည့်ကြတာပေါ့…
Body ကတော့ခါတိုင်းလို Aluminium frame ကိုရှေ့နောက် Glass နဲ့အုပ်ပေးထားပါတယ် (ဂလပ်စ်ဆင်းဒဝစ်ချ်ဆိုလားပဲ)။ Display ကိုတော့ Optic Amoled Capacitive Touchscreen ကိုသုံးပေးထားပြီး Size ကတော့ 6.2 inches လောက်ရှိမှာပါ။ Design ကတော့ OnePlus 6T အတိုင်း Water drop notchကိုပဲသုံးထားပြီး Fingerprint ကိုလည်း Display အောက်မှာပဲမြုပ်နှံထားမယ်လို့သိရပါတယ်။ Protectionအဖြစ် Gorilla Glass6အုပ်ပေးထားမယ်လို့သိရပါတယ်။ Chipset အဖြစ် Snapdragon 855 ကိုသုံးထားပေးပြီး OxygenOs9ကိုမောင်းနှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင် 48 mp f/1.8 Main camera နဲ့ 5mp Telephoto Camera တို့ကိုထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားတယ့် Dual Camera Setup ကိုပဲတွေ့မြင်ရမှာပါ။ သတင်းတွေ အရ ပေါ့။ အနောက်ဘက် Camera မှာ ကျွန်တော်ကတော့ Wide Angel Lens နှင့် ရိုက်ချင်တာပေါ့။
Selfie Camera အဖြစ်16mp f/2.0 ကိုသုံးပေးထားပြီးသတင်းကောင်းကတော့ Wide Angle Lens တပ်ဆင်ပေးထားတာပါ။ Battery ကတော့ 4150mAh လောက်ထည့်သွင်းပေးထားပြီး Recharge လုပ်ဖို့အတွက် 30W အထိပဲ Support ပေးမှာပါ (Mate 30 Pro မှာ 55W တဲ့နော်)။ လောလောဆည်အရောင်ကတော့ Black တစ်မျိုးပဲတွေ့ရပါသေးတယ်။
OnePlus7Pro ရဲ့ Body လေးကတော့ OnePlus7အတိုင်း Aluminium Frame ကိုရှေ့ရောနောက်ရော Glass နဲ့ အုပ်ပေးထားပါတယ်။ Display ပိုင်းမှာ 90Hz Optic Amoled Capacitive Touchscreen ကိုသုံးပေးထားပြီး Size ကတော့ 6.64 inches လောက်ရှိမယ်ဆိုတော့ OnePlus7ထက်နည်းနည်းလေး ပိုကြီးသွားမယ့်သဘောပါ။ ဒါ့အပြင် Waterdrop Notch လည်းပျောက်သွားတယ့်အတွက် Screen to body ratio က 87.6% လောက်ဖြစ်သွားပြီး OnePlus7ထက် 7.6% လောက်ပိုများသွားပါတယ်။ OnePlus7မှာ 416 Pixel per inches ရှိပြီးတော့ OnePlus7Pro မှာတော့ ~518 Pixel per inches လောက်ရှိမှာပါ။ ကျန်တဲ့ အရာတွအကုန်လုံးနီးပါးကတော့ OnePlus7နဲ့တူတူပါပဲ။
Photo Credit: Ishan Agarwal‏
Rear camera ကတော့ Triple camera setup ဖြစ်သွားပါတယ်။ 48mp f/1.8 Main camera, 16mp Telephoto camera နဲ့ 8mp Ultra wide camera တို့ကို Triple camera setup ထဲမြုပ်နံှထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ Battery ကတော့ 4000mAh ဖြစ်သွားပြီးRechargeလုပ်ဖို့အတွက် 30W ပဲ Support ပေးအူးမှာပါ။
ဝမ်းနည်းစရာလား၊ ခေတ်မှီတာလား မသိ သတင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ OnePlus7နဲ့ OnePlus7Pro ရာ 3.5mm headphone jack မပါဝင်ပါဘူး။ IP Rating ကိုလည်းမထည့်သွင်းထားပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် OnePlus7Pro မှာတော့ထည့်ပေးသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ် (ဈေးကလည်းအနည်းဆုံး 10lakhs ပဲ)။ ဆိုတော့ ဒီအသစ်ထွက်လာမဲ့ OnePlus7နဲ့ OnePlus7ကို စာဖတ်သူတွေကော ဘယ်လိုသဘောရတယ်ဆိုတာ Comment လေးတွေမှာပြောသွားပါဦး…
Hole-punch ပံုစံအသစ္၊ ပိုမို Aggressive ဆန္တဲ့ Curved Display နဲ႕ပြဲထြက္လာမဲ့ Galaxy Note 10